Nwere ike iche n'echiche ịhapụ ọrụ gị ịbụ onye nkuzi Pokémon?; echela, nke a emeworị | Akụkọ akụrụngwa
Nwere ike iche n'echiche ịhapụ ọrụ gị ịbụ onye nkuzi Pokémon?; echela, nke a emeworị
Pokémon Go ọ na-aga n'ihu na-eto eto n'ihe banyere ịga nke ọma wee bụrụ, ọbụlagodi, oke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya ma ọlị ị ga-ahụ ọtụtụ mmadụ na-agagharị n'akụkụ nkịta na-achọ Pokémon dị iche iche ma ọ bụ chere oge ha iji nwee ike ịkwụsị na PokéStop. Agbanyeghị, ị nwere ike iche na ihe amalitela aka aka.
Ma ọ bụ ya Sophia Pedraza, onye nkụzi London nke nyere nkuzi onwe na mgbakọ na mwepụ, Bekee na egwu, kpebiri ịkwụsị ọrụ ya ka ọ bụrụ ọkachamara Pokémon Go., ihe dị ka ya si dị ga-aba uru karị, na-ekwu okwu banyere akụ na ụba.
Ọtụtụ n'ime unu ga-eche n'ezie otu ị ga - esi nweta ego site na egwuregwu Nintendo ọhụrụ yana ọ nweghị ụzọ ọzọ karịa ịre ahịa ọkpụkpọ site na eBay. Agbanyeghị na ọ nwere ike iyi egwu, enwere ndị na-akwụ nnukwu ego maka akụkọ nwere egwuregwu dị mma yana nchịkọta miri emi ma na-atọ ụtọ nke Pokémon.
Dịka ọmụmaatụ Ọ bụghị ọtụtụ ụbọchị gara aga e rere akaụntụ site na eBay nke ruru ọnụahịa nke euro 8.700. N'ezie, ịnweta ụdị akụkọ a chọrọ ọtụtụ ọrụ na nraranye, ihe Pedraza na-agaghị akọ, onye kwuputalarị na site n'otu ụbọchị gaa na ụbọchị ọzọ ọ nọrọla ihe karịrị awa 18 ịchụ nta Pokémon.
Ugbu a onye London a na-ebo ihe dị ka pound 2.000 otu ọnwa, euro 2.389 na mgbanwe, ọnụ ọgụgụ ọ na-atụ anya gafere site na ịrara onwe ya nye Pokémon Go, nke ọ ga-amalite site na inweta ọtụtụ ekwentị, iji nwee ike igwu egwu n'otu oge yana nwee ike ị nweta akaụntụ ndị ọzọ ọ ga - eresị ndị na-ere ahịa kacha ọnụ ala.
You ga - achọ ịrara onwe gị nye ọrụ aka ka ị bụrụ Pokémon Go ọkpụkpọ na ibi ndụ site na egwuregwu Nintendo?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nwere ike iche n'echiche ịhapụ ọrụ gị ịbụ onye nkuzi Pokémon?; echela, nke a emeworị
Pokémon Go Plus na-egbu oge ruo Septemba
Omega2, kọmpụta ihe na-erughị euro 5 ga-ekwe omume